Wararka Maanta: Talaado, Sept 12, 2017-Ciidamada kenya oo heegan la gelay kaddib weerarkii Al Shabaab ay ku qaadeen degmadda Beled-Xaawo
Ciidanka ayaa tan iyo shalay waxaa ay ku jiraan dhiifanaan xooggan, waxaana ciidamo farabadan la geeyay xuduuda.
Dadka deegaanka iyo saraakiisha ciidamada ayaa shalay sheegay in ay maqlayeen rasaas iyo qaraxyo ka dhacayay degmadda Beled-Xaawo, taasi ay sababtay in ciidamaa heegan ay galaan.
Deegaanno ka tirsan Jubbooyinka iyo Gedo, waxaa ku sugan ciidamada Kenya oo taageeraya ciidamada dowladda Dowladda Federaalka ee Soomaaliya.
Al Shabaab ayaa dhowr-jeer weeraro ka geystay magaalladda Mandera ee waqoyi bari dalka kenya, waxaana weeraradaasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira.
Dadka magaalladda ayaa sheegay in Al-Shabab ay magaalladda soo weerareen salaaddii subax iyagoo laba dhinac kasoo weeraray.
Kooxda Al-Shababa ayaa weerar ku qaaday saldhig milatari oo ku yaalla duleedka magaalladda halkaasi ay la beegsadeen weerarro iskugu jira qaraxyo iyo weerar ciidan.